Khilaafka Farmajo iyo Axmed Madoobe oo dib usoo noqday | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaafka Farmajo iyo Axmed Madoobe oo dib usoo noqday
Xiisadda siyaasadeed ee soo cusboonaatay ayaa laga cabsi qabaa inay carqaladayso doorashooyinka Xildhibaanada Baarlamanka soo socda ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xiisad hor leh ayaa ka dhex bilaabatay Jubbaland iyo Villa Soomaaliya, taasoo salka ku haysa arrimaha gobolka Gedo, oo dawladda Federaalka mudo dheer faragelin ku haysay.
Sarkaal katirsan Jubbaland, oo magaciisa ka gaabsadey ayaa u sheegay Keydmedia Online in Axmed Madoobe uu ka dalbatay Farmaajo in Ciidanka DF uu kasoo saaro Gedo, hadii uu doonayo in doorasho ka dhacdo gobolka.
Axmed Madoobe ayaa aaminsan inuusan maamuli karin doorashadda Xildhibaanada laga soo dooranayo Gedo, hadii dawladda Dhexe ay gacanta ku hayso degmada Garbaaharey, oo ah degaan doorashadda labaad ee Jubbaland.
Heshiiskii doorashadda ee lagu gaarey Muqdisho 17-kii September ayaa dhigaya in Maamul Goboleed kasta labo magaalo ay ka dhacdo doorashadda, Caasimadda iyo magaaladda labaad ee ugu wayn, iyadoo Jubbaland lagu qaban doono Kismaayo iyo Garbahaarey.
Waxaa jira tartan xoog leh oo Farmaajo iyo Axmed Madoobe ugu jiraan Xildhibaanada ka imaan doono Gedo, oo Garbahaarey lagu soo dooranayo, kuwaasoo ka imaanaya beelaha degan gobolka, oo aan taageersanayn Maamulka Jubbaland ee fadhiya Kismaayo.
0 Comments Topics: axmed madoobe farmaajo jubbaland kismaayo